ကုမ္မဏီတိုင်း အမြတ်အစွန်းကိုပဲ အာရုံမစိုက်သင့်ပါ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Business & Economics » ကုမ္မဏီတိုင်း အမြတ်အစွန်းကိုပဲ အာရုံမစိုက်သင့်ပါ
Posted by phone_kyaw on Jul 21, 2012 in Business & Economics, Know-How, DIY | 24 comments
ပထမဆုံး သူတို့ အနေနဲ့ ရုံးခန်းထဲမှာထိုင်ပြီး ကမ္ဘာပေါ်ကနိုင်ငံတွေထဲကနေ ရွှေထွက်များနိုင်တဲ့ နိုင်ငံတွေကို ရွေးချယ်တယ်။ အင်္ဂလိပ်လိုကတော့ Global View of the Macro Geological Picutre on high level targeting လို့ ခေါ်ပါတယ်။ ဘာနည်းပညာကိုသုံးလဲဆိုတော့ Global Business Area Rating (GBar) ဆိုတဲ့နည်းပညာပါ။ ဒါကတော့ ရွှေထွက်များတဲ့နိုင်ငံတွေကို ရုံးခန်းထဲကနေ မြေပုံဆွဲတဲ့အတက်ပညာပါ။ ဥပမာ အမေရိကန်ကပိုင်တဲ့လန်းက် ဆဲဗင်းလို ဆက်တလိုက်နဲ့ လေ့လာသလို အခြားနောက်ဆုံးပေါ်နည်းပညာတွေနဲ့ လည်းလေ့လာတယ်။ ကုမ္မဏီကြီးတွေက ဘယ်နေရာမှာ Ore Body လို့ ခေါ်တဲ့ ရွှေကြောရှိလဲဆိုတာကို လူကိုယ်တိုင်မသွားခင်ကတည်းက အကြမ်းဖျင်းသိပါတယ်။
တကယ်လို့ ရွှေထွက်ကောင်းတဲ့နေရာကို တွေ့ ရင် သူတို့ အနေနဲ့ တိုက်ရိုက်ရှာဖွေရေးဆင်းပါတယ်။ ဒီနေရာမှာ စက်ယန္တယားအကူအညီနဲ့Samples ကောက်တယ်။ တူးဖို့ အထိကို အဆင့်ဆင့်ကျော်ဖြတ်ရတယ်။ ရွှေကြောကြီးရင် ကြီးသလို လေးငါးနှစ်အထိ ရှာဖွေရေးလုပ်ရတယ်။ တကယ်လို့ ရွှေအထွက်နှုံးကောင်းတာကို တွေ့ ရင် ကုန်ကျစရိတ်နဲ့ အမြတ်ဘယ်လောက်ရမလဲဆိုတာကို တွက်ချက်ရတယ်။ Resources Geologist ဆိုတဲ့ပညာရှင်က သူ့ ရဲ့ အဓိကအလုပ်ဖြစ်တဲ့ အမြတ်နဲ့ အရှုံးကို မတူးခင်ကတည်းက တွက်ပြီးသားပါ။ ဥပမာ ကျနော်တို့ ကုမ္မဏီဆိုရင် Rules of 2s ဆိုတဲ့ ပေါ်လစီကို ကျင့်သုံးတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ရွှေတွေ့ ပြီဆိုရင် သုံးလေးတန်လောက်ကို စိတ်မဝင်စားပါဘူး။ ရွှေအောင်စနှစ်သန်းအနည်းဆုံးရှိရမယ်။ တနှစ်ကို ရွှေအောင်စ နှစ်သိန်းထွက်ရမယ်။ ဒိထက်နည်းရင် ကျနော်တို့ စိတ်မဝင်စားပါဘူး။
မြန်မာပြည်မှာ တစ်ပိုင်တနိုင်တူးတဲ့ လူတွေရှိတယ်။ ဒါကို အင်္ဂလိပ်လို့ ခေါ်ရင် Artisanal and Small-scale Mining (ASM) လို့ ခေါ်တယ်။ နိုင်ငံတိုင်းမှာ ဒီလိုလူတွေအများကြီးပါ။ မိရိုးဖလာလုပ်စားတယ်လို့ လည်း ဆိုလို့ ရတယ်။ အထူးသဖြင့် ဆင်းရဲတဲ့နိုင်ငံတွေနဲ့ ဖွံ့ ဖြိူးဆဲနိုင်ငံတွေမှာ ပိုပြီးတွေ့ ရတယ်။ The World Gold Council က တစ်ပိုင်တနိုင်လုပ်ငန်းလုပ်တဲ့လူတွေဟာ သန်း ၈ဝ ကနေ သန်းတစ်ရာအထိ ရှိမယ်လို့ ခန့် မှန်းတယ်။ အလုပ်လက်မဲ့ဖြစ်လာပြီး ဆိုရင် ဒီလိုအလုပ်ကိုလုပ်ကြတယ်။ အာရှမှာအများဆုံးပဲ။ ကမ္ဘာ့ရွှေထုတ်လုပ်မှု့ ရဲ့၁ဝ ရာခိုင်နှုံးကို တစ်ပိုင်တနိုင်တူးတဲ့လူတွေက ထုတ်လုပ်ပေးတယ်။ ကျန်တဲ့ ၉ဝ ကိုတော့ ကုမ္မဏီကြီးတွေက ထုတ်ပေးတယ်။ ဒီနေရာမှာ ကုမ္မဏီကြီးတွေနဲ့ အဲဒိလို လူတွေကြားမှာ ပြသနာရှိတယ်။ ဘယ်လို ပြသာနာလဲဆိုတော့ လက်နဲ့ တူးတဲ့လူတွေက ရွှေရှိမဲ့နေရာကို သိတယ်။ သူတို့သိတာကို ကုမ္မဏီကြီးတွေက လေ့လာရတယ်။ ပြီးတော့ အဲဒိနေရာ အကြီးအကျယ်တူးကြပါတယ်။ ဒီလိုဆိုတော့ လက်နဲ့ တူးတဲ့လူတွေ အလုပ်လက်မဲ့ဖြစ်ကြတယ်။ ဒါနဲ့ ကုမ္မဏီတွေကို ပြသာနာရှာရောပဲ။ အင်ဒိုနီးရှား၊ ဂါနာ၊ ပီရှုး စတဲ့ နိုင်ငံတွေမှာ ခုတ်ကြသတ်ကြတဲ့အထိဖြစ်ဘူးတဲ့ ဥပမာတွေရှိတယ်။ သေလိုက်တဲ့လူတွေကလည်း မနည်းဘူး။
ပီရူးနိုင်ငံမှာ ကုမ္မဏီရဲ့ ရွှေတူးဖော်ရေးမိုင်းရှိတယ်။ မိုင်းပတ်လည်မှာ ဒေသခံရွာပေါင်းများစွာလည်း ရှိတော့ ကုမ္မဏီနဲ့ သူတို့ ရဲ့ ဆက်ဆံရေးပြေလည်စေဖို့ ၊ သူတို့ လိုအပ်ချက်တွေကိုလည်း ဖြည့်ဆည်းပေးရတယ်။ ပီရူးအစိုးရက ဘယ်လို ဥပေဒရှိလည်းတော့ မသိဘူး။ သို့ သော် ကျနော်တို့ ပေါ်လစီက သူတို့ ရဲ့အခက်အခဲကိုလည်းဖြေရှင်းပေးရမယ်လို့ ပြဌာန်းထားတယ်။ ဒါကို ဝန်ထမ်းတိုင်းလုံးဝ လိုက်နာပြီး အကောင်အထည်ဖော်ကြရတယ်။ ဒေသခံတွေအတွက် ကျန်းမာရေး၊ ပညာရေး၊ အလုပ်အကိုင်ရရှိရေးနဲ့ စည်းပွားရေးလုပ်ငန်းတွေ ကြီးထွားလာအောင်ကို အစီအစဉ်တွေချမှတ်အကောင်အထည်ပေးတယ်။ အဲဒိဒေသမှာ မိုင်းတူးတော့ ဝန်ထမ်းတွေလိုတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံကလို ကုမ္မဏီတွေရဲ့ အလုပ်သမားတွေအားလုံးက တရုတ်နိုင်ငံကတင်သွင်းလာသလိုမျိူး လုပ်လို့ မရဘူး။ ရွာတွေကနေ အလုပ်သမားပေါင်း ၁၂ဝဝ-ကိုအလုပ်ခန့် တယ်။ သူတို့ က မိုင်းလုပ်ငန်းဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်မှုမရှိတဲ့အပြင် ဗဟုသုတလည်း အင်မတန်နည်းတယ်။ နိုင်ငံခြားက ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်တွေကနေ အဲဒိဒေသကအလုပ်သမားတွေကို လုပ်ငန်းခွင်ဆိုင်ရာ သင်တန်းတွေ၊ လက်တွေ့ တွေပေးတယ်။ ဥပမာ ဘူဒိုဇာမောင်းနည်းပညာ၊ မြေသည်စက်မောင်းနည်းပညာ၊ ပန်းရံပညာကစပြီး မီးပြင်တဲ့ပညာအဆုံး သင်တန်းတွေကို အချိန်ယူပြီးသင်ပေးတယ်။ ဒါကို The Driect Area of Influnece (DAI) လို့ ခေါ်တယ်။ သူတို့ လည်း ပညာနဲ့ အလုပ်ရသလို ကုမ္မဏီအတွက်လည်း တွက်ခြေကိုက်တယ်။ နိုင်ငံခြားက ဈေးကြီးကြီးပေးငှားရတဲ့ ဝန်ထမ်းတွေအစား ဈေးပေါတဲ့ဒေသခံတွေနဲ့ တင် မိုင်းကလည်ပတ်လို့ ရတော့ နှစ်ဘတ်လုံးအတွက် အဆင်ပြေတယ်။
ပီရှုးမှာ ရွှေမိုင်းစဖွင့်တော့ ရွာတွေက သူတို့ ချောင်းတွေ ညစ်ပတ်ကုန်ပြီဆိုပြီဆင်ခြေပေးတယ်။ ကန့် ကွက်တယ်။ နောက်ဆုံး ကျနော်တို့ ကဘယ်လို စဉ်းစားရလဲဆိုတော့ Open Transpency ကို ကျင့်သုံးလာရတယ်။ သူတို့ ယုံအောင်လုပ်တဲ့နည်းလမ်းက အားလုံးပွင့်လင်းမှ ရမယ်။ ဒါနဲ့ မင်းတို့ ရွာတွေက ကိုယ်စားလှယ်ရွေး။ ပြီးရင် အဲဒိလူတွေနဲ့ ရေသန့် ရှင်းရေးကို ကျွမ်းကျင်တဲ့ပညာရှင်တွေနဲ့ တွဲပေးပြီး မြစ်ချောင်းတွေမှာ ရေစစ်တမ်း ကောက်တယ်။ ခြောက်လ တစ်ခါကောက်တယ်။ ခေတ်မှီစက်တွေနဲ့ စစ်တယ်။ ဒါတင်မဟုတ်သေးဘူး။ Exernal Audit လိုခေါ်တဲ့ အပြင်က အစိုးရအသိအမှတ်ပြု လက်မှတ်ရ ရေအရည်အသွေးကို စစ်တဲ့ ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်တွေက ခြောက်လတစ်ခါပုံမှန်ပြန်စစ်တယ်။ ရလာတဲ့ ရလာဒ်ကို လူထုကို အသိပေးတယ်။ တကယ်လို့ ရေမသန့် တာတွေ့ ရင် မိုင်းကို ပြန်ပြီ ဒိထက်ကောင်းတဲ့စီမံခန့် ခွဲမှု့ နဲ့ စိစစ်ပြန်တယ်။ နောက်ဆုံး လူထုကလည်း လက်ခံလာတယ်။ သူတို့ ထင်တာတွေ မှားနေတယ်လို့ ပြောတယ်။ တချိူ့ သော သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ လူအခွင့်အရေးလှုပ်ရှားသူတွေက ပထမဆုံးသူတို့ အထင် ချောင်းတွေမြစ်တွေက ညစ်ညမ်းနေပြီဆိုပြီးကန်ပိန်းလုပ်ထားတာကို ပြန်ရုပ်သိမ်းတယ်။ ဒါ့ကြောင့် Company တိုင်း Open Transpency က အောင်မြင်ရေးအတွက် အင်မတန်ကို အရေးကြီးတယ်။
ဒီက ကုမ္ပဏီတွေက လိပ်လို ယက်နေကြတယ်
ဒါ့ကြောင့် ဆလာကီး ကိုဘုန်းကျော် လာပြီး ဖွင့်ရင်ကောင်းမှပ ။
မစ္စတာဘုန်းကျော် ကြီးကတော့ လုပ်ချလိုက်ပြန်ပဟ
( လက်နဲ့ တူးတဲ့လူတွေက ရွှေရှိမဲ့နေရာကို သိတယ်။ )
အဲ့သည်အပေါ်မှာ အခြေံရေးတာလေး ကြိုက်သဗျာ
ကျုပ်ကတော့ ရိုးကို တာပိတ်ပြီး ငါးပက်တာဘဲသိတယ်
သဘာဝထိန်းသိမ်းရေးနဲ့ လူမှုဘ၀ထိန်းသိမ်းရေးဘက်က ဦးစားပေးဆွေးနွေးပေးတဲ့ အတွက် လက်မထောင်သွားပါတယ်။
တခြားနိုင်ငံက ရွှေတွေသွားတူးတော့ အပေးအယူတွေ ဘယ်လိုရှိလဲဟင်။ နိုင်ငံပိုင် သရံဇာတတွေကို နိုင်ငံခြား ကုမ္ဗဏီတွေက အကြီးအကျယ် ရေကုန်ရေခန်း လာတူးသွားတော့ နိုင်ငံ အတွက်မနစ်နာဘူးလား။ တူးခွင့်ပေးလိုက်တဲ့ နိုင်ငံအတွက် ဘယ်လောက်အမြတ်ကျန်သလဲ သိချင်လို့။
မနစ်နာအောင် အစိုးရမှာ ဥပဒေရှိဖို့ လိုတယ်။ ဒါကိုတော့ ကျနော်မသိပါ။ တကယ်လို့ သာ နိုင်ငံပိုင်သယံဇာတကို သူများတူးတာမကြိုက်ရင်ကိုယ်က တူးတက်အောင်သင်ထားဖို့ လိုတယ်။ လက်ရှိအခြေအနေက သူများဆီက သင်ရမဲ့အခြေအနေဆိုတော့ တက်ပြီးမှ ကိုယ့်ဟာကိုယ်တူးတာပေါ့ဗျာ။ နှစ်ဦးနှစ်ဘက်အကျိူးရှိပါတယ်။
စီးပွားရေးသမားတွေကတော့ သူတို့အတွက် အမြတ်များများကျန်အောင် ကြည့်မှာပါပဲ…။ လက်ညှိုးထိုး ရောင်းစားခံရတာတွေတော့ များပါပြီ…။ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုတာက ခုချိန်မှာ ဂရုစိုက်ဖို့ တကယ်လိုလာပါပြီ…။ တောင်ပေါ်လေနဲ့ မြို့လေတောင် မတူတော့ဘူးလေ…။
နောက်ပိုင်း ၀င်လာမယ့် နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြုတ်နှံသူတွေကို
ဒီပိုစ့်လေးပဲဖြစ်ဖြစ် အဲဒါမျိုးရေးထားတာပဲဖြစ်ဖြစ် သတင်းစာ/ဂျာနယ်လို မျိုးမှာ ပါလာရင် လူတော်တော်များများဖတ်ဖြစ်လိမ့်မယ်။
တကယ်တော့ အဲလို စံချိန်စံနှုံးမြင့်တဲ့ ကုမ္ပဏီမျိုး လက်တွေ့ရောက်လာဘို့တော့ ခဲယဉ်းပါသေးတယ်…။
ဟုတ်တယ် ကိုဘုန်းကျော်ရေ….ကုမ္မဏီတိုင်း အမြတ်အစွန်းကိုပဲ အာရုံမစိုက်သင့်ပါဘူး၊ အထူးသဖြင့် လူသားအရင်းအမြစ်တွေပေါ်ကနေ အမြတ်အစွန်းမယူပဲ၊ တိုးတက်ပြောင်းလည်းလာတဲ့ နည်းပညာပေါ်မှာသာ အမြတ်အစွန်းရှာသင့်ပါတယ်။
လူသားအရင်းအမြစ်တွေပေါ်ကနေ အမြတ်အစွန်းဆိုတာကတော့ လုပ်ခလစာလျှော့ပေးတာ၊ ပေးသင့်တဲ့ ခံစားမူတွေကို မသိကျိုးကျွံပြုတာ၊ safety နဲ့ ပတ်သက်တဲ့အရာတွေမှာ ထောက်ပံ့မူအားနည်းတာ၊ ပွင့်လင်းမြင်သာမူမရှိတဲ့ စီးပွားရေး ဆောင်ရွတ်မူတွေပေါ့၊ နောက်ထပ်ရှိပါသေးတယ်…………………..လက်ရှိ local မှာရှိတဲ့ ကုမ္မဏီတော်တော်များများဟာ အဲဒီအရာတွေကို ကျူးလွန်နေကျတယ်။ ဒါကြောင့် local မှာဆန္ဒပြမှုတွေ ခဏခဏ ဖြစ်နေတယ်ဗျာ။
ကိုဘုန်းကျော်တို့ ကုမ္မဏီရဲ့ စံချိန်တွေနဲ့၊ မြန်မာပြည်မှာသာ လာရောက်ရင်းနှီးမြုပ်နှံရင်တော့ မြန်မာပြည်ရဲ့ အလုပ်သမားတွေ ကိုယ်စား လှိုက်လှိုက်လှဲလှဲကို ကြိုဆိုပါတယ်ဗျာ။
7 ခုမြောက်လက်မ ထောင်ခဲ့ပါတယ်။
(မိုင်းတူးတဲ့အခါမှာ သဘာဝပါတ်ဝန်းကျင်အပြင် လူမှု့ ဘဝတွေကို ထိခိုက်စေတယ်။ ဒီလိုမဖြစ်အောင် ကုမ္မဏီတွေအနေနဲ့ စဉ်းစားရတယ်။ နှစ်ဘက်လုံးအတွက် အကျိူးအမြတ်ရှိမှ လုပ်တယ်။ အထူးသဖြင့် ကုမ္မဏီတွေက အထူးတာဝန်ယူကြရတယ်။ တာဝန်မယူနိုင်ဘူး မယူချင်ဘူးဆိုရင် မတူးရဘူးလို့သြစတျေးလျနိုင်ငံ မိုင်းဥပဒေက အတိအလင်းပြဌာန်းထားသလို ကျူးလွန်ခဲ့ရင်လည်းလုံးဝကို အရေးယူတယ်။ လျှောက်လွှာတင်ကတည်းက ဒေါ်လာ သန်းနဲ့ ချီပြီး အပေါင်တင်ထားရတယ်။ ကျနော်တို့ ကုမ္မဏီက ၂၅-သန်းတင်ရတယ်။ အစိုးရရဲ့ ဥပဒေကို မလိုက်နာရင် အဲဒိငွေဆုံးပဲ။ ဒါ့ကြောင့် ဘယ်သူမှ မလှုပ်ရဲဘူး။)
အလွန်မှတ်သားစရာကောင်းတဲ့နေရာပါ။ အစိုးရရဲ့ ဥပဒေကို အခြားနိုင်ငံတွေနမူနာယူပြီး ကြိုတင်ဆွဲသင့်ပါတယ်။
ကုမ္ပဏီတွေက ဒေသခံတွေရဲ့ ကျန်းမာရေး၊စီးပွားရေး၊ပညာရေးပါထည့်တွက်ပေးတဲ့ပေါ်လစီ လည်းရှိသင့်ပါတယ်။
ဒီပိုစ် က အမှန် တန်ဘိုး ရှိ တဲ. ပိုစ်ပါ – အထူး သဖြင်. လွတ်တော်မှ လူကြီးများ ဖတ် ရမဲ. စာပါ ဘဲ၊ ကဘုန်းကျော် ကို ဒီပိုစ် တစ် ခု နဲ. တင် အလွန် လေးစား ကျေးဇူးတင် ပါ ကြောင်း ထပ် ပြီး ယ္ခု စာ မျိုး များများ ရေ ပါ ဟု တိုက် တွန်း ပါ ကြောင်း – လက်မ ၁၀ ချောင်း ထောင် သွား ပါ ကြောင်း
မိုင်းရှူး မှာ မကြာခဏ မြေပြိုမှူကြီး တွေ အကြီး အကျယ် ဖြစ်တယ် ။ နေအိမ်တွေ ဈေးဆိုင်တွေ ကုမ်မဏီတွေ လူတွေလည်း အများကြီး ပြိုတဲ့အထဲပါတာပေါ့ ။ အဲဒီ မှာ အလုပ် သွားလုပ်ပီး ပြန်လာတဲ့ သူငယ်ချင်း တယောက် က ပြောတယ် ။ မိုင်းရှူးဟာ တနေ့ထက်တနေ့ ကြောက်ဖို့ ပိုကောင်းလာတယ်တဲ့ ။ ပီးတော့ မူးယစ်ဆေး သုံးတဲ့ လူတွေလည်း ပေါမှပေါတဲ့ဗျာ ။ အဲဒီ မှာ ကျောက်တူး ကြတဲ့ ကုမ်မဏီ တွေနဲ့ လောပန်းတွေ ဟာ အများအားဖြင့် တရုတ် တွေလို့ သူပြောပြလို့ ကြားဘူးသဗျ !
ကိုဘုန်းကျော် ရေ ! လက်မထောင် ပီး ဖတ်သွားတယ်ဗျာ ။ ဘာလို့ လဲဆိုတော့ ၂၀၀၀ ခုနှစ်နောက်ပိုင်း မှာ သံ ၊ ကြေးနီ ၊ ကျောက်မျက် နဲ့ ရွှေတူး ဖော်မှု တွေ အများအပြား စတင်လုပ်ကိုင်လာတာတွေရလို့ဗျို့ ။ ( – ) စက်ရုံ ( တည်ဆောက်ဆဲ ) ဆိုရင် မိုင်းမှာ တန်ချိန် သန်း ( ၇၀ ) အနည်းဆုံးလို့သိရတယ် ။ အဲဒီ မိုင်းမြေထဲ မှာ လူ နဲ့ သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင်အတွက် အန်နရယ် ရှိတဲ့ ဆာလဖာ လို အာဆင်းနစ် လို အရာတွေပါဝင်နေတယ် ။ ဆာလဖာ က လေထုထဲက ရေငွေ နဲ့ ပေါင်းရင် ဆာလဖျူရစ် အက်ဆစ် ၊ အာဆင်း နစ်က အဆိပ် ။
ကဘန်းကျော်ပို့ စ်ကို ဖတ်သွားတယ်။အဲ့လိုဘဲ ကမ္ဘာမြေကြီးကိုတူးကြ၊ဆွကြ၊
မြေပေါ် မြေအောက် သံယံဇာတတွေ ဖော်ယူလိုက်ကြတဲ့ ကမ္ဘာ့ရာသီဥတုကို
ထိပ်တန်းမှာ ရောက်နေတဲ့ Post အတွက် Congratulations ပါ ကဘုန်းကျော်။
အများသူငါ လို ဘဲ လက်မ ထောင် ခဲ့ပါတယ်။
တစ်ခါမှတောင် မကြားဘူး တဲ့ ဗဟုသုတတွေ အတွက် လဲ ကျေးဇူးပါ။
ခေါင်းစဉ် လေး ကိုလဲ သဘောကျပါ၏။
နေရာတိုင်းမှာ win-win situation အတွက် ဖန်တီးပေးခြင်းဟာ အကောင်းဆုံးပါဘဲ။ :-)
ရွှေတူးဖော်ရေးလုပ်ကွက်တစ်ခုပေါ်လာရင် ထောတဲ့လူက ထော။
အဲလိုလုပ်ကွက်ပေါ်လာရင်ဒေသခံတွေလဲပျက်စီးကုန်တာပါဘဲ။
ကျနော့် သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်က ၊
မြန်မာနိုင်ငံထဲကို ဘယ်သူတွေကို ပြန်ဝင်ခွင့်ပေးသင့်တယ် ဆိုတဲ့ကိစ္စကို ၊
မြန်မာ အစိုးရနှင့် ဆွေးနွေး အကြံပေးဖို့ အတွက် မြန်မာပြည်မှာ ရှိနေပါတယ် ။
သူ့ကိုတော့ မြန်မာ အစိုးရ ကိုယ်တိုင် ဖိတ်ခေါ်ခဲ့တာပါ ။
( သူက အမေရိကန်နိုင်ငံသား ခံထားပြီးသား အမေရိကန် MBA ရထားပြီးသူပါ )
သူ့ အပြောအရတော့ ( သူ့ အပြောအရ ) မြန်မာ အစိုးရ အနေနှင့် ၊
နိုင်ငံရေး သဘောထား ပျော့ပြောင်းသူ တွေထဲကမှ ၊
၁ ။ ပညာ တော်တော်လေး တတ်သူ ။
၂ ။ အကြီးအကျယ် ရင်းနှီး မြုပ်နှံ မယ့်သူ ။
တွေကိုပဲ လောလောဆယ် Visa ပေးလိုတဲ့ သဘောရှိနေပါတယ် ။
နိုင်ငံ ရဲ့ အထိခိုက်မခံနိုင်သေးတဲ့ တည်ငြိမ်မှုကို အပြိုအကွဲ မခံချင်တဲ့ သဘောပါ ။
ကိုဘုန်းကျော်က အကြီးအကျယ် ရင်းနှီး မြုပ်နှံ မယ့်သူ Category ထဲ ပါနိုင်ပါတယ် ။
ကိုဘုန်းကျော် Visa အမြန်ဆုံး အောင်မြင်ပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးပါတယ်ဗျာ ။
အထက် က ကျွန်တော့ ကွန်မန့် က မပြည့်စုံ သလို ဖြစ်နေလို့ ဆက်မန့် လိုက်ပါတယ် ။ တကယ် ကောင်းမွန် အောင်လုပ်ကြမယ် ဆိုရင်လည်း လက်ရှိ လုပ်ကိုင်နေတဲ့ သူတွေကို မထိခိုက် စေချင်တဲ့ သဘောပါ ။ အဲဒီက မိုင်းမြေပုံတွေ ကို ကျွန်တော် ကြည့်ဘူးတယ် ။ ပီးတော့ ကျွန်တော် က သူ့ကိုမေးတယ် ။ ဆာလဖာ တွေ လေထု ထဲ မရောက်အောင် ဘယ်လို ကာကွယ်မလဲပေါ့ ! သူက မြေပုံနဲ့ ရှင်းပြတယ် ။ မိုင်း မခွဲရမဲ့ ဇုန်တွေ ။ ဒါပေမဲ့ စက်ရုံ က ထွက်မဲ့ မီးခိုးထဲမှာ တော့ပါနေဦး မှာပဲ ။ ဒီအတွက် သူက ဆက်ရှင်းပြတယ် ။ မီးခိုး ကို Treatment လုပ်မယ် ။ အဲဒီ လိုလုပ်တဲ့ နေရာမှာ ဆာလကို ထုံးနဲ့ သတ်တဲ့ Plant တလုံးပါ ထည့် ဆောက်မယ် ။ ပီးတော့ မီးခိုး ခေါင်းတိုင်ကို မီတာ ( ၁၅၀ ) အမြင့် အထိတည်ဆောက်မယ် ပေါ့ ။ အဲဒီ မှာ ကျွန်တော် က သူ့ကို နောက်ခဲ့တယ် ။ ” မင်းတို့ စက်ရုံ လည် ပီး နောင် ဆယ်နှစ် အနှစ် နှစ်ဆယ် လောက်နေရင် ဒီဒေသ က လူတွေ မတွေဘူး မကြုံဘူးတဲ့ Acid Rain ကို တွေရကြုံရ တော့မှာ ပေါ့ လို့ ” ။ အဲဒီ နောက် သူနဲ့ ကျွန်တော် စက်ရုံသုံး ရေနဲ့ မီးခိုး ကို Treatment လုပ်တဲ့ အကြောင်း ဆက်ဆွေးနွေး ဖြစ်ခဲ့တယ် ။ အဲဒါ အပြင် အရင် က တည်ခဲ့တဲ့ စစ်တောင်း စက်ကူ စက်ရုံရဲ့ စွန့်ပစ်ရေတွေ ကြောင့် စစ်တောင်း မြစ်ထဲ ငါးသလောက် တွေ မျိုးတုန်း လုမတတ် ဖြစ်ခဲ့တဲ့ အကြောင်းလည်း ပါတယ် ။ အခုကျွန်တော် တို့ နိုင်ငံ က စက်ရုံ ကြီး တချို့ မှာ Water Treatment Plant တွေ တည်ပီး စက်ရုံ က စွန့်ပစ်ရေ တွေကို ရေဘောက်ဆာ တွေနဲ့ စနစ်တကျ စွန့်ပစ်နေပါပီ !
လက်မထောင်ရုံတင်မကပါဘူး …. လက်ခုတ်လက်ဝါးပါ တီးပြီး အားပေးပါတယ် ကိုဘုန်းကျော်ရေ ….
ဒီပို့စ်ဖတ်ပြီးတော့မှပဲ သူများနိုင်ငံကလူတွေကပဲ လူဖြစ်ကျိုးနပ်သလိုလိုခံစားမိပါတယ် ။
ဒီနိုင်ငံမှာ မိုင်းလုပ်ငန်းမပြောနဲ့ အိမ်တွင်းစီးပွားရေး လုပ်ငန်းလေးတွေတောင် မိမိတို့ရဲ့ စွန့်ပစ်ပစ္စည်းနဲ့ ရေဆိုးရေညစ်တွေကို တာဝန်မယူနိုင်သေးဘူး ။ ကိုဘုန်းကျော်တို့ဆီမှာ စက်ဆီတွေမြေပေါ်ကျမှာစိုးလို့တောင် ဂရုစိုက်ကြရတယ်ဆိုတာ သိရပြီး …. ဒီက အခြေနေနဲ့ ကွာခြားချက်တွေကို နှိုင်းယှဉ်အားငယ်စိတ်ဖြစ်မိပါတယ် ။
ကုမ္ပဏီတွေမှာ တာဝန်ယူလိုစိတ်ရှိတာ … အစိုးရက ချမှတ်ထားတဲ့ ပေါ်လစီရယ် ၊ အပေါင်တင်ထားရတဲ့ ပိုက်ဆံတွေရယ်ကြောင့်လည်း ပါမယ် ။ ဒီမှာလည်း အဲ့ဒါမျိုး အတုခိုးပြီး လိုက်လုပ်ကြည့်ပါလား ။ ကုမ္ပဏီတွေ တာဝန်သိစိတ်ဖြစ်ကို ဖြစ်လာမယ် ထင်ပါတယ် …. ။ ခြစားတဲ့ ၀န်ထမ်းတွေသာ ပေါများလာတာ ၊ တာဝန်ယူမှု အပိုင်းကျတော့ ယိုင်နဲ့ဆွေးမြေ့လာတာ …. ကြွေကျမြေခတော့မယောင်ပါပဲ ။
မနက်က ပြည်တွင်းထုတ်ဂျာနယ်တစ်ခုမှာ ဖတ်လိုက်ရတယ် …. ဦးအောင်သိန်းလင်းက မြစ်ဆုံ စီမံကိန်းကို မဖြစ်ဖြစ်အောင် ပြန်လုပ်သွားမတဲ့လေ …. ။
ဘယ်သူသေသေ ၊ ငတေမာလျှင်ပြီးရောဆိုတဲ့ စိတ်ဓါတ်လေးတွေလျော့ပြီး ၊ အများတွက် အနည်းငယ်စဉ်းစားပေးကြလျှင် ကျွန်မတို့နေထိုင်တဲ့ နိုင်ငံကြီး ပိုမိုလှပလာမယ်ထင်တာပါပဲ ….
ဒါနဲ့ စကားမစပ် … လှိုင်သာယာ စက်မှု ဇုံ(၂) ထိပ်ဖက်က လမ်းမကြီးနဲ့ ကပ်လျှက် စက်ရုံတစ်ခုက .. စွန့်ပစ်ပစ္စည်းနဲ့ ရေတွေကို ဗရမ်းဗတာ လုပ်ပစ်နေတာ … ဘယ်စည်ပင်ကမှ ၊ သတိပေးတာမြစ်တာမျိုး မလုပ်သေးဘူးထင်တယ် … ။
အဲ့ဒီစက်ရုံက ရှားလာလား သကြားလုံး ၊ ဂျေကပ်ဂျယ်လီး ၊ ရိစ်ရ်ှကော်ဖီမတ်တွေ ထုတ်တယ်လေ …. အဲ့ဒီနားက ဖြတ်သွားလျှင် … သတိထားကြည့်ကြပါ … စည်းမဲ့ကမ်းမဲ့တာဝန်မဲ့လုပ်ထားတာမျိုး … တွေ့ပါလိမ့်မယ် ။
အဲ့ဒိစက်ရုံပိုင်ရှင်က ဦးကျော်သိန်း။ သူ့သားက ဦးဇော်လက် (ယခု Myanmar Indobest Company ပိုင်ရှင်)။ ဦးဇော်လက်မိန်းမက ယခုလက်ရှိ TMW (Sony) Company နဲ့ ဝိတိုရိယ ဆေးရုံပိုင်ရှင် ဦးဝေသစ်ရဲ့သမီး ဒေါ်ဝေသစ်လွင် …………….. ဆိုတော့ကား….သူတို့ကိုတော်ရုံတန်ရုံလောက်နဲ့ လွယ်လွယ်အရေးယူလို့ မလွယ်ဘူးထင်ပါ့…….
စွန့်ပစ်ပစ္စည်းနဲ့ ရေတွေကို ဗရမ်းဗတာလုပ်တဲ့ကိစ္စကိုသာဆိုလိုခြင်းဖြစ်ပါတယ်…..
အမြန်ဆုံး ဖြစ်လာပါစေ လို့ မျှော်လင့်မိပါတယ်။
၁၅ ခုမြောက်လက်မကို ထောင်ပေးခဲ့ပါတယ် ကိုဘုန်းကျော်ရေ။
ရွှေတူးဖော်ရေး မှ မဟုတ်ပါဘူး ကဏ္ဍအစုံမှာ ၀င်လာမဲ့ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမည့် ကုမ္မဏီတိုင်းကို ဒီလိုပဲ လာစေချင်တာပါ။
သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကိုမထိခိုက်အောင် သတိထားရမယ်၊ ဒေသခံတွေနဲ့လဲအဆင်ပြေရမယ်။ ကောင်း တယ်ဗျာ
မကြာခင်ကကြားလိုက်တယ် ဆားလင်းကြီးနယ်ထဲက ဒေသခံတွေနဲ့ တရုပ်မိုင်းcompany နဲ့ပြသနာတက် လို့ဆိုပြီး။ အဲ့လိုမျိုး ရဖို့တစ်ခုပဲ သိတဲ့ company တွေက မြန်မာနိုင်ငံထဲအရင်ရောက်နှင့်နေတော့ သိပ်ကို နစ်နာတာပေါ့ဗျာ။